トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ OK Hanemono in aragtida soohdinta?
Sanadihii la soo dhaafay, sababtoo ah waxaa la soo saaray by badan magazine pachinko, macluumaadka uu noqday sidaas u fudud in ay soo galaan gacanta. Sidaas daraaddeed, haddii qofka ku dhuftay pachinko ah, hal mar, waxaan think're xiiso u arkaya in ku arkay nin aragti xadka odhan.
Halkan, aragti soohdinta, Waxaan jeclaan lahaa inaan eegno. First of dhan, ka hor inta sheeko ee aragtida soohdinta, waxaa jira wax taas oo la sheegay in Xadka. Mashiinka pachinko The, waxaa jira ixtimaal ah hit weyn, siday u kala horreeyaan. line soohdintu waxay, haddii Ghanna ee wadada itimaalka Ghanna of mishiinka, lacagta la sarifan cadadka iyo heshay in maalgashiga, ayaa sheegay in ka mid ah hal dhibic laan si ay u noqon daro ama laga jaro 0.
in ay dhacdo pachinko waa, line xadka this, jaaniska hit weyn iyo xidhiidhka heerka Chang, iwm, dib-u-xisaabiyaa noocyo kala duwan oo qiimaha tiro, waxaa lagu muujiyay sida tirada kacaanka kun oo yen ah. Mashiinka Pachinko waa, gudaha iyo dibedda, ku celi ama aan ka bixin, waxaan karaan si ay u isugu in jaaniska Ghanna oo uu soo dhigay.
Sidaas, ka dhacay line xadka ama dhinto dheeraad ah oo uu soo dhigay mashiinka kasta, marka in ay isugu on itimaalka Ghanna set mishiinka ah, sababtoo ah faa'iido in ay tahay, 's fikradda ah aragti soohdinta.
sida xaqiiqada ah, aragti, laakiin waxaan qabaa waxay noqon lahaa sidaa darteed, waxa aanu u tagaan waa dhab inay tan sameeyaan si fiican. Isagoo ka hadlayay sababta, tii pachinko ayaa laga sameeyey oo ciddiyahana iska beddelo by dukaanka. tii Pachinko aad tahay sixitaanka ciddiyaha jidka line soohdinta ah, waxa ay u muuqataa in aysan jirin waqti hore.
haddii ciddiyaha dhab ahaan u furan agagaarka bilowga, marka aad u malaynayso in ay jirto ayaa sidoo kale ka baxsan xuduudka, iwm Haddii aad adkeeyay sixitaanka ciddiyaha ilaa Weeraryahanka, ayaa la hagaajiyo, sida xoqid kubada waa, inkastoo wax badan agagaarka bilowdo, loo yareeyo heshay noqon doonaa dhakhso. Marka ay timaado in
oo dhan heshay ee, waxaa la furo oo keliya ciddiyaha kaliya ee u dhow ee bilowga, aan wax in waxa uu noqonayaa mid aan ku filnayn. In ay ku dhaqmaan aragti xadka this, waxaa lagu abaabulaa wejiga, oo loox, aynu eegno dhammaan sixitaanka dhidibkii, yaraynaysaa ee kubadaha Waxaad u baahan tahay in ay doortaan miis yar. sida ugu macquulsan
badan dheer la sugayay soo baxay kubad, iyadoo aan yareynta, haddii aan dego hit soo socda waa weyn, laakiin haddii aad eegto wadarta guud ee dheelitirka ee lacagaha, uu noqdo diidmo ah, maxaa yeelay, aragtida soohdinta mar dambe ma ku qanacsan tahay.
, si kastaba ha ahaatee, waa in pachinko gelin aragti xadka this ee madaxayga, si ay ugu guuleystaan ??Waxaan u maleynayaa in aad wax ku ool. In the case of pachinko waa, waqtiga wada in ay jaaniska hit weyn, si ay lacag sameeyaan waa qiimaha tirsi ah aan waxtar lahayn oo aan laga noqon this badan oo kun oo yen hooseeya.
in ay hagaan xawaaraha wareeg ah, haddii aan dooran madal ay, ka badan ku Daynanaa Iyagoo ku soo gani Waxaan qabaa in natiijada ay tahay mid wanaagsan. In ay ku dhaqmaan aragti soohdinta, si ay u qaataan waqti, waxaad u baahan tahay si ay u ururiyaan xogta waxaa sidoo kale lagu sameeyaa muddo dheer.
Si kastaba ha ahaatee, tan iyo hit ee aragtida, waxaa laga yaabaa in ay jiraan waa qiimo isku day ah.